Andrianan'ny fandriampahalemana, Fiangonana Eran-tany Manerana Switzerland
Rehefa teraka i Jesosy Kristy dia nisy andiana anjely nanambara: "Voninahitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana eto an-tany miaraka amin'ny olona ankasitrahany" (Lk 1,14:XNUMX). Amin'ny maha-mpahazo ny fiadanan'Andriamanitra, ny Kristiana dia miavaka amin'ity tontolo feno herisetra sy tia tena ity. Ny Fanahin Andriamanitra dia mitaona ny Kristiana amin'ny fiainana fandriampahalemana, fikarakarana, fanomezana ary fitiavana.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny tontolo manodidina antsika dia voarohirohy hatrany amin'ny tsy fifandeferana sy tsy fandeferana, na politika izany, foko, finoana, na fiaraha-monina. Na izao aza, ny faritra manontolo dia tandindomin-doza noho ny hatezerana taloha sy ny fankahalana. Niresaka an'ity fahasamihafana lehibe ity i Jesosy izay hanamarihana ny mpianany rehefa nilaza taminy izy hoe: "Mandefa anareo toy ny ondry eo amin'ny amboadia aho" (Mt 10,16:XNUMX).
Ny olona amin'izao tontolo izao, izay mizara amin'ny fomba maro dia tsy mahita ny lalana mankany amin'ny fiadanana. Ny fomban'izao tontolo izao dia fomba iray mahaliana. Io no lalan'ny fitsiriritana, fialonana, fankahalana. Fa hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: «Avelako ho aminareo ny fiadanako, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy omeko anao izay omen'izao tontolo izao ”(Jn 14,27:XNUMX).
Ny kristiana dia nantsoina mba hazoto eo anatrehan'Andriamanitra, "hiady izay manao fandriampahalemana" (Romana 14,19:12,14) ary "hitady fihavanana amin'ny olona rehetra sy fanamasinana" (Heb. 15,13:XNUMX). Izy ireo dia mpiray antoka amin'ny "fifaliana sy fiadanana rehetra ... amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina" (Rom XNUMX:XNUMX).
Ny karazana fandriam-pahalemana, "ny fandriam-pahalemana izay avo noho ny antony rehetra" (Fil 4,7) dia mandresy ny fisarahana, ny tsy fitoviana, ny fahatsapana fitokanana ary ny toe-tsaina manasaraka. Fa kosa, mitondra fandriam-pahalemana sy fahatsapan-tena sy tanjony iraisana - "firaisana ao am-panahy amin'ny fehin'ny fiadanana" (Efes 4,3: XNUMX).
Ho velona ao amintsika i Kristy. I James dia nanoratra izao manaraka izao momba ny kristiana: "Ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fiadanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana" (Jakoba 3,18:XNUMX). Ity karazana fandriam-pahalemana ity dia manome antsika antoka sy filaminana hiatrehana ny loza, manome antsika fiadanam-pitoniana ary milamina ao anatin'ny loza. Tsy voaaro amin'ny olana amin'ny fiainana ny Kristianina.
Eo am-piandrasana io andro mahafinaritra io, dia andeha hahatsiaro ny tenin'ny apostoly Paoly ao amin'ny Kolosiana 3,15:XNUMX: “Ary ny fiadanan'i Kristy, izay niantsoana anareo ho tena, dia manjaka ao am-ponareo; ary mankasitraka. ”Mila filaminana ve ianao eo amin'ny fiainanao? Ny Andrian'ny fiadanana - Jesosy Kristy - no "toerana" hahitantsika io fandriampahalemana io!